Induction Ukubambisa iplastiki, insimbi yentsimbi kunye neplastiki
Ikhaya / izicelo / Ukubambisa ukuxhamla / Ukudityaniswa kweBonding
Udidi: Ukubambisa ukuxhamla tags: ukudibana, Ukungenisa ubushushu, ukubopha iiplasitiki, ukubopha iiplasitiki, yokubambisana, induction bonding plastiki, ukufudumeza kobushushu, ukuhambisa ngeplastiki
Ukuxhamla ukuxhamla isebenzisa ukufudumala ukutshitshisa ukunyanga iimpawu zokubambisana. Ukuchithwa yiyona ndlela eyona ndlela yokunyanga ama-adhesive and sealants for components of car such as doors, hoods, fenders, back mirviews and magnets. Ukukhupha kwakhona kuphulukisa i-adhesives kwizihlanganisi zombumba kunye ne-carbon fiber-to-carbon fiber. Kukho iintlobo ezimbini eziphambili zokubambisa imoto: i-spotbonding, ephilisa iinqununu ezincinci zezixhobo ukuba zihlangane; ukudibanisa ngokugcwele, okuphelisa amajoyina.
iplastiki yokubambisa isinyithi
DAWEI Iinkqubo zokudibanisa qi ni sekisa iinjongo ezichanekileyo zamandla kwipaneli nganye. Amashishini amancinci achaphazelekayo anciphisa ubuncinane beepaneli. Ukuqhwaba akudingeki xa kuhlanganiswa iipaneli zensimbi, okunciphisa uxinzelelo kunye nokuphazamiseka. Iphaneli nganye ihlolwe ngumbane ukuze kuqinisekiswe ukuba ukuphazamiseka kwamandla kumbane kukunyamezela. Ngokuzibophezela ngokugcwele, ubukhulu obukhulu-yonke ikhoyili inciphisa imfuno yecilisi yokugcina.
Ukutshisa ukunyuka yindlela yokubambisana ekhethiweyo kwimboniselo yezimoto. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ukukhonkxa kwintsimbi kunye ne-aluminium ishidi lensimbi, ukuchithwa kuqhutywe ngokunyanisekileyo ukudibanisa izinto ezintsha ezinokukhanya kunye ne-carbon fiber materials. Ukukhishwa kwento isetyenziselwa ukudibanisa imicu ephihliweyo, izicathulo zokuwaphula kunye namagnet kwi-electrotechnical industry. Isetyenziswe kwakhona kwizikhokelo, imilayezo, iithalafu kunye neepaneli kumacandelo ezimpahla ezimhlophe.
Uchungechunge lwe-DW-UHF kunye ne-DW-HF yintloko ukunikezwa kwamandla okushisa izicelo zokubambisa.